Daawo: Aniga ayaa adiga kaa saxan! | Gacanlibaaxnews
Daawo: Aniga ayaa adiga kaa saxan!
February 21, 2018 - Written by C M
Halkan ka daawada muuqaal kooban oo wacyigelin ah oo ku saabsan in qofku aanu keligii isku qancin aragtidiisa ee ta dadka kale uu tixgeliyo.
Waxaana xubintani qayb ka tahay barnaamijka taxanaha ah ee Miid Maaxatay oo uu soo saare ka yahay tababare-saxaafadeed Siciid Xagaa Afrax. Waxaana xubintan soo saaristeeda kala qayb qaatay tababare-saxaafadeed Mahad Jaamac Koronto.